Android လုလင်: October 2013
Facebook Messengeသုံးစွဲသူ Android ဖုန်း /Tablet ပိုင်ရှင်တွေအတွက်
29 ရက်နေ့ 10 လပိုင်းက Update လေးပါ
မားကပ်ထဲဝင်မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Facebook Messenger အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပ်ဒိတ်မလုပ်ရသေးရင် ယူထားသင့်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Facebook v3.9 build 513769 Apk (16 MB)
Facebook သုံးစွဲသူ Android ဖုန်း /Tablet ပိုင်ရှင်တွေအတွက်
29မှာ အပ်ဒိတ်ထွက်လာတဲ့ Facebook version အသစ်လေးပါ
ပြေး ခုန် ပစ် အားကစားဂိမ်း The Activision Decathlon v0.9.8-0 APK Game(43MB)
ပြေး ခုန် ပစ် ကစားနည်းစုံအားကစားဂိမ်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်
Android: 2.3နှင့်အထက်မှာ ထည့်ကစားနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 8:23 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Twin Me! CloneCamera v2.3 Apk 5MB
Twin Me! ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်အရာကိုမဆို နှစ်ကိုယ်ခွဲပေးမယ့် app ပါ။
သူ့လုပ်ဆောင်ပုံက ဒီလိုဗျ။ Twin Me! မှာပါတဲ့ ကင်မရာမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ အရင်ဆုံး ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို အရင်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ပြီးရင် Twin Me! က
ဘယ်ဘက်ခြမ်းကို ခဏ save ပေးထားပါမယ်။
နောက်ပြီး ညာဘက်ခြမ်းကို ဆက်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဘယ်ညာ နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရပါမယ်။
iPhone Notifications v6.4 Apk 8MB
စက်ရုပ်ဖုန်းတွေမှာ Notificationsတက်လာတဲ့အခါ အိုင်ဖုန်း စတိုင်နဲ့
အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ကဲ android လုလင် ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ
google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီ page မှာပဲ direct link ထုတ်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြရအောင်
အဆင့်(1)အောက်မှာပေးထားတဲ့ box ထဲမှာ ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ယူမယ့် google play က app link ကိုထည့်ပါ။
အဆင့်(2)Generate download link ကိုနိုပ်ပါ။
အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါမယ် ။
အောက်ကအစိမ်းရောင် button လေးဖြစ်တဲ့ click here to download .....ဆိုတာလေးကို နိုပ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီးဒေါင်းကြစေဗျာ။
Android လုလင် http://apps.evozi.com/apk-downloader/
ရေးတဲ့အချိန် 7:16 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဆီးဂိမ်းအကြိုပွဲအတွက် မြန်မာခြင်းလုံးဂိမ်း (For Andriod Game)
ဒီဂိမ်း လေးကတော့ ဆီးဂိမ်း ကြိုပွဲအတွက် ထုပ်ထားတဲ့ မြန်မာခြင်းလုံး ဂိမ်းလေးပါ ကျနော် ကစားကြည့်တော့ ကောင်းလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ online လည်း ကစားလို့ ရတယ် offline လည်းကစားလို့ရတယ် နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ဘော်ဘော် တွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီဂီမ်းလေးရှိနေရုံနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဆီးဂိမ်းပွဲ စပီးဆိုရင် live ကြည်ရှုနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 6:39 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Dr Driving ( ပိုက်ဆံ ခိုးပြီးသား )
ဂိမ်းလေးပါဗျာ.. အားလုံးလဲသိပြီးသားထင်ပါတယ်ဗျာ..Dr Driving
မိုက်တယ်။ပိုက်ဆံကလဲခိုးပြီးသားပါ.. ခိုးပီးသား ပိုက်ပိုက်တွေနဲ့ ကားအသစ်
ဒီတစ်ခါ ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူများမဒေါင်းရပါနော်..
ကဲ...ဒီတစ်ခါ ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူများမဒေါင်းရပါနော်..
SexyDance လေးကို Live Wallpaper လေးအဖြစ်နဲ့
ထွက်လာလို့ ကျွတ်နေရင်တော့ ၀တ်ပေးရတယ်နော်
sexy game ဖြစ်ပေမယ့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းမဟုတ်လို့ ပုံလေးတွေပြလိုက်ပါတယ်။
Phone ရဲ့ Home Screen ပေါ်မှာ မိမိတင်ထား ချင်တဲ့ Photo တွေကို Slide Show လေးတွေနဲ့ Animation တွေ ထည့်ပြီးအလှဆင်နိုင်ဖို့အတွက် Animated Photo Frame Widget + v4.7.1 Apk ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တချို့ Hand Set တွေမှာ Original ပါတယ်ဆိုပေမယ့် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ မတူပါ ဘူးနော်။ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် Photo Frame တွေကလည်း တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။ အောက်မှာနမူနာ ပုံလေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ စပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:38 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကိုကို ညီညီတို့အတွက် ဂိမ်းအလန်းစားလေး(မြန်မာမိန်းကလေးများ မဒေါင်းရ မဆော့ရ )
ကိုကို ညီညီတို့အတွက် sex ဂိမ်းအလန်းလေးပါ
ကစားပြီးမှ ဟ မိုက်လှချေလား ကိုလုလင်ရယ် ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်နော် ဟီးးးးးးး
မြန်မာမိန်းကလေးများကို သက်ညှာသော အားဖြင့် ပုံနှင့်တကွ ကြော်ညာမ၀င်တော့ပါဘူး။
ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းသေချာဖတ်ကြနော် (မြန်မာမိန်းကလေးများ မဒေါင်းရ မဆော့ရ ) ပါထပ်ဖြည့်ထားတယ်နော်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:19 PM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဖုန်းထဲက သီချင်းသံကို နှစ် ဆ ကျယ်လာစေမယ့် Sensor music player (for andriod)
Android ဖုန်းတွေမှာ သီချင်းဖွင့်နားထောင်လို့ အသံတိုးနေတယ်ဆိုရင် Sensor Music Player လေးကိုသုံးကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ရိုးရိုး Player နဲ့ ဖွင့်တာထက် အသံနှစ်ဆ ပိုကျယ်တဲ့အပြင်သီချင်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန် နောက်တစ်ပုဒ်ကျော်ချင်ရင် ခလုတ်တွေ လိုက်နှိပ်စရာမလိုပဲ ဖုန်း Screen ပေါ်ကို လက်ကလေးဝှေ့လိုက်တာနဲ့ ပြောင်းတာ၊ ဖုန်းကို ဘောင်းဘီ အိတ်ထဲ ထည့်ထားရင်းပုတ်လိုက် တာနဲ့ပြောင်းတာ၊ စားပွဲပေါ် တင်ထားရင်း တစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ပုဒ် ပြောင်းတာတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
FxGuru: Movie FX Director ( For Andriod Phone) ဖုန်းမှာ ဗီဒီယိုရိုက်ရင်း Effect မျိုးစုံး ပါတဲ့ဆောဝဲလေးပါ။
Andriod ဖုန်းအတွက် FxGuru: Movie FX Director လေးက ထွက်ထားတာ ကြာပါပြီ။ အရင်က Version က Effect စုံပေမဲ့ နှစ်ခုပဲ Free ပေးပါတယ်။ အခုထွက်တဲ့ အသစ်ကတော့ နဲနဲပိုစုံပါတယ်။ နေရာတခုမှာ ဗီဒီယို ရိုက်ရင်းနဲ့ အဲမှာ Effect အလန်းလေးတွေထည့်တဲ့ဆောဝဲလေးပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ် ကြည့် တာတော့ တော်တော်လေးလန်းပါတယ်။
အောက်မှာ Video ဖိုင်လေးတင်ပေးထားပါတယ်။ လန်းမလန်းဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းပြီး စမ်းသပ်ကြည့် လိုက်ပါ။ အဲထဲမှာ ၀ယ်ရတာလေးလည်း ပါ ပါတယ်။ အလကားလည်းပါတယ်။ တော်တော်လေး လန်းပါတယ်။ v.1.4.1 လေး အသစ်ထွက်ထားတဲ့ App လေးပါ။ Andriod Version 2.2 အထက်မှာ သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Danger Dash (Andriod Game)
Danger Dash ဂိန်းလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတယောက် တောင်းဆိုလာလို့ တင်ပေးလိုက် တာပါ။ အနောက် ကနေ ကျားတွေလိုက်ပြီး ကိုယ်က အရှေ့ကနေ ပြေးပြီး ဒင်္ဂါးပြားတွေ လိုက်စား ရင်း ခုန် ကျော်လွား ရင်းပြေးရတဲ့ ဂိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Temple Rum နဲ့ ပုံစံတူပါတယ်။ ဆော့လို့လည်း အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။
OctroTalk-For Android (Android ဖုန်းမှာ အလန်စား Gtalk ချက်မယ်)
မင်္ဂလာပါဗျာ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေ အတွက် မိမိတို့ဖုန်းမှာ ပါလာတဲ့ Gtalk ကို မသုံးချင်ဘူး မကြိုက်ဘူးဆိုရင်OctroTalk ကို ဆောင်ထားပါဗျာ
Huawei Ascend P6 အတွက် B118 နဲ့ ဆုံးတဲ့ Firmware
Huawei Ascend P6 အတွက် B118 နဲ့ ဆုံးတဲ့ Firmware ကို 11.10.2013 ရက်နေ့က တရားဝင် ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကျွန်တော် Dropbox မှာတင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေက Error နေလို့တစ်ခြား Upload တင်တဲ့ ဆိုဒ်မှာ Upload ပြန်တင်ပြီး ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:03 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Y511 မြန်မာစာအဆင်ပြေတဲ့ MMSD Smart Zawgyi v1.3 လာပါပြီ။
အရင် version v1.2 မှာမရတဲ့ ဖုန်းတွေကိုထက်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်
Android version 1.6 ကနေ 4.2.2 အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ Y511 တွေလဲအဆင်ပြေပါပြီ။
Y320, G610 ကဲ့သို့သောဖုန်းတွေ ၀လုံးတွေမတက်ပဲအဆင်ပြေပြေရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
iMobile istyle များနှင့် တရုတ်ဖုန်းများအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 10:57 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
တ တုံ တုံ ၊ တ ဂွမ် ဂွမ် နဲ့ တက်လာတဲ့ Notification တွေကို ပိတ်ပစ်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်အမြဲသုံးနေတဲ့ App တွေက လွဲပြီး တစ်ခြား App တွေကနေ တက်လာမယ့် Noti တွေကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အခုမှပဲ အတော် စိတ်ချမ်းသာသွားပါတယ်။ internet ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တစ်ချို့ App တွေကနေ ကြေငြာ Noti တွေ အရမ်းတက်တယ်ဗျာ။ သွားနှိပ်မိရင်လဲ အခန့်မသင့်ရင် virus က ၀င်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ အမြဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ App တစ်ချို့လောက်ပဲ Noti တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပေါ့။ ဥပမာ Facebook , Viber စသဖြင့် ကိုယ်သုံးလေ့ရှိတာပဲ ခွင့်ပြုထားလိုက်ပါ။ ဒါဆို မလိုအပ်တဲ့ Noti တွေ Clear လုပ်ရတဲ့ ဒုက္ခကနေ ကင်းဝေးသွားပါပြီ။ Notification Off မှာ ကိုယ်မကြည့်ချင်တဲ့ Noti တက်မယ့် App တွေကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်း Model ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော် Android 4.3 ထိ Root နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Perfect or Kingo Root 1.0.6 English Version
ဖုန်း Model ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော် Android 4.3 ထိ Root နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Perfect Root 1.0.6 Official Version အသစ်စက်စက်ကို မနေ့က တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီကောင်က Chinese Language ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူအနေနဲ့ နည်းနည်း အဆင်မပြေတာလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ခု English Version ကို ထပ်မံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီ Perfect Root ရဲ့ အခြားနာမည် တစ်ခုကတော့ Kingo Root ဖြစ်ပါတယ်.. ဗားရှင်းက 1.0.6.1720 ဖြစ်ပါတယ်.. Root နိုင်တဲ့ Android Smart Phone စာရင်းထဲက အချို့ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
ရေးတဲ့အချိန် 5:49 PM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ root ဆော့ဝဲ, ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ
Huawei Ascend P6 ကို root လုပ်နည်း
Huawei Ascend P6 က တော်တော်လေးပါးလွှာတဲ့ကောင်လေးပါ...
6.18mm ပဲထူတယ်တဲ့ Google Nexus4ကိုစိန်ခေါ်မယ့်ကောင်ပါ...
သုံးထားတဲ့ hardware တွေက 1.5Hz quad-core processor ။
4.7 inches 720p Display နဲ့ 8 megapixel ရှိတဲ့ကင်မရာကိုသုံးထားတာပါ
Ascend P6 ကို root မယ်ဆိုရင်
ရေးတဲ့အချိန် 5:31 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
samsung setting ကို မြန်​မာဘာသာချိန်းမယ်​ root user only
Samsung settingကို မြန်​မာဘာသာချိန်းတယ့်​​ဆော့ဝဲ​လေးပါ
​ဖုန်းကို ​နောက်​ပီးဖုန်းက offical version 4.2.2 နင့်​အထက်​ရှိရပါမယ်​
ရေးတဲ့အချိန် 8:19 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Paypal account ရှိသူများအတွက်﻿ Paypal.apk
Paypal account ရှိသူများအတွက်﻿ပါ။
လုလင်ပျိုတော့ ဘလော့ဂါဘ၀ စတင်မှ paypal အကောင့်လေးတစ်ခုလုပ်အုံးမှပဲဆိုပြီး
နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကို လုပ်ခိုင်းထားလို့ အကောင့်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။
short link ဆိုဒ်တွေကလည်း ညစ်ပတ်တာနဲ့ပဲ ခုထိငွေတပြားမှမရှိသေးပါဘူးဗျာ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် အကောင့်ရှိနေတော့ လိုရင်သုံးရအောင် ထည့်ထားတယ်ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 8:01 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဓါတ်ပုံတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံတွေရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Perfectly Clear (2.0.6) Full
ဓါတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်ရတာ ၀ါသနာပါသူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Perfectly Clear v2.0.6 ဆိုတဲ့ Application လေး တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပိုမိုကောင်း မွန်လာအောင် (ကြည်လင်ပြက်သားမှုရှိလာအောင်) အတက်နိုင်ဆုံး ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Application လေးက ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးသားပုံတွေကို မိမိ လိုချင်တဲ့အနေအထားပုံစံ မျိုးဖြစ်အောင်ပြု ပြင် ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Photo နဲ့သက် ဆိုင်တဲ့ Effect တွေ လည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။ အောက်မှာလည်း နမူနာကြည့်နိုင်အောင် Screen Shoot လေးတွေရိုက်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။
RocketDial Dialer Contacts v3.6.3 Apk
RocketDial Dialer Contacts အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပ်ဒိတ်လေးပါ
သူကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် ဖုန်း Dialer Screen ဒီဇိုင်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်သလို
Contact function မှာလည်း Smart Search features ပါဝင်တာကြောင့် ဖုန်းနံပါတ် ၊ လူနာမည်ရှာဖွေရှာမှာပိုမိုမြန်ဆန်လာစေမှာပါ ။ Group management, Title management , Organization Management စတဲ့ Contact Group function တွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ Screen ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပွတ်ရွေ့ရုံနဲ့ SMS , Dial , Contact စတဲ့ app သုံးခုကိုလိုသလိုပြောင်းနိုင်တဲ့ Amazing Gesture features လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
တော်တော်လေးလန်းတဲ့ Dialer application လေးဖြစ်ပါတယ်။
iOS7HD Apex / Nova Theme v1.0 Apk
Apex and Nova Launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် iOS7Theme အလန်းလေးပါ
Store မှာ 1.99ဒေါ်လာပေးရပြီး အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်
ရေးတဲ့အချိန် 4:57 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Skype အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 10 လပိုင်း4ရက်နေ့ ထွက် လေးပါ
Play Stor ထဲဝင်မရလို့ အပ်ဒိတ်မလုပ်သေးရင် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 4:54 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
5 ရက် 10 လပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ Facebook APK 3.8 build 417397
Facebook သုံးစွဲသူ Android ဖုန်း /Tablet ပိုင်ရှင်တွေအတွက်5ရက် 10 လပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့
Facebook version အသစ်လေးပါ
ရေးတဲ့အချိန် 3:45 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြို့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့ မိစ္ဆာတွေကို မြားနဲ့နိုမ်နှင်းရတဲ့ဂိမ်းလေး
မြို့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့ မိစ္ဆာတွေကို မြားနဲ့နိုမ်နှင်းရတဲ့ဂိမ်းလေးပါ
ရိုးရိုးကစားမယ်ဆို Level ရှစ် ကိုး လောက်ကနေ တက်ဖို့မလွယ်ဘူး
အခုဂိမ်းလေးက Unlimited.Coins ဆိုတော့ လက်နက်တွေပါဝါမြင့်တင်ပြီး ကစားနိုင်တာပေါ့ဗျာ
ဖုန်းထဲမှာလေယာဉ်မောင်းရမဲ့ Game လေးပါ..
သရဲဂိမ်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ReKillers v1.0 Apk Game
Y220T ကို Error ကင်းကင်း Root လုပ်မယ်.
Y220T ကို Root လုပ်လိုက်ရင် Camera ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်..
ဒီ Error ကိုဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အရင်ဆုံး Firmware ပြန်တင်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားမှဒီနည်းနဲ့ ပြန်ပြီး Root ဖောက်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..
ကဲ Root လုပ်နည်းကို အရင်ကြည့်ရအောင်
ရေးတဲ့အချိန် 9:37 PM No comments: ရေးသားသူ ရာဇ၀င်ထဲက အမောင်လုလင်ပျို
Android လုလင် မန်ဘာဝင် 300 ပြည့်အမှတ်တရ
သူငယ်ချင်းအားလုံး မင်္ဂလာပါ နော်
အမှတ်တရနေ့တွေမှာ အမှတ်တရဖြစ်စေမယ့် အလန်းလေးတွေတင်ပေးနေကြဆိုတာ Androidလုလင် Blog ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုအားပေးနေကြတဲ့သူငယ်ချင်းတိုင်းတော့ သိပြီးလောက်ပြီထင်တယ်နော်။
ဒီလမှာတော့ မန်ဘာဝင်300 ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် မန်ဘာဝင် 300 မပြည့်ခင် 2ယောက်လောက်အလိုမှာပဲ ကျနော်လုလင်ပျို ရန်ကုန်လာရပါတယ်။
အင်တာနက်အထိုင်များရင် မေမေ ပေးသွားတဲ့ထမင်းဖိုးငွေကုန်သွားရင် ပုန်းချော်သွားမှာစိုးတဲ့တစ်ကြောင်းကြောင့် အခုလို မန်ဘာဝင် 300 ပြည့်အမှတ်တရ ပို့စ် ရေးဖို့နောက်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ မန်ဘာဝင် 300 ပြည့်အမှတ်တရ ကိုရေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အမှတ်တရနေ့တွေမှာရှယ်ဖြစ်တာလေးတင်ချင်လို့ ရှယ်ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ ဒီအခုပြောမှာလေးက အွန်လိုင်းသုံးကြသူအားလုံးအတွက် အကြိုက်ဖြစ်စေမှာမို့ တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:34 PM 20 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
26 ရက်နေ့ထွက် youtube apk လေးပါ
Message ကို iOS7 style Message အနေနဲ့ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း သိပ်မများတော့ အသုံးပြုကြည့်ပါ အကြိုက်တွေ့မှာပါ
ပြေး ခုန် ပစ် အားကစားဂိမ်း The Activision Decathlo...
ဆီးဂိမ်းအကြိုပွဲအတွက် မြန်မာခြင်းလုံးဂိမ်း (For An...
ကိုကို ညီညီတို့အတွက် ဂိမ်းအလန်းစားလေး(မြန်မာမိန်းက...
FxGuru: Movie FX Director ( For Andriod Phone) ဖုန...
OctroTalk-For Android (Android ဖုန်းမှာ အလန်စား Gt...
samsung setting ကို မြန်​မာဘာသာချိန်းမယ်​ root us...
5 ရက် 10 လပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ Facebook APK 3.8 bui...
မြို့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့ မိစ္ဆာတွေကို မြားနဲ့နိုမ်နှ...
သရဲဂိမ်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ReKillers v1....
Message ကို iOS7 style Message အနေနဲ့ အသုံးပြုချင်...